Chii chinonzi Google Analytics Cohort Kuongorora? Yako Yakatsanangurwa Nongedzo | Martech Zone
Chipiri, May 5, 2015 Monday, May 4, 2015 Shane Barker
Google Analytics nguva pfupi yadarika yakawedzera yakanakisa inotonhorera kuti iongorore mhedzisiro yekunonoka kwevashanyi vako vanozivikanwa sekuongororwa kweboka, inova beta vhezheni yezuva rekutora chete. Pamberi pekuwedzera uku kutsva, varidzi vewebhu uye vaongorori vepamhepo vaisazokwanisa kutarisa mhinduro inonoka yevashanyi vewebhusaiti yavo. Zvaive zvakaoma kwazvo kuziva kana X vashanyi vakashanyira yako saiti neMuvhuro uye kuti vangani vavo vakashanya pazuva raitevera kana zuva rakatevera. Itsva yeGoogle ongororo yeboka chimiro chinokubatsira iwe kuwana uye kuongorora iyi data kuwedzera yako webhusaiti kubatanidzwa.
Chii chinonzi "Cohort"?
Cohort izwi rinoshandiswa kutsanangura boka revanhu vakasungwa pamwechete nekuda kwehunhu hwakafanana. Google yakashandisa izwi rekuti "cohort" kutsanangura kunonoka kuitika mukati analytics uye gadzira imwe mhando yenguva-yakaedzwa sekisheni kuongorora maitiro emushandisi. Pamberi peichi chiitiko chakabatanidzwa muGoogle Analytics, zvaive zvakaoma kuongorora macohort kunge ezuva rekutora, asi izvi zvinogona kugoneswa uchishandisa tsika dzakasiyana uye zviitiko.
Mashandisiro Ekushandisa Cohort Kuongorora
Iwe unogona kuwana nyore nyore iyo yekuongorora chimiro pasi pechikamu chevateereri chakaratidzwa mune rako reruboshwe sidebar muGoogle Analytics. Ukangodzvanya, iwe uchaona girafu ichiteverwa netafura. Kunyange tafura yacho ingave yakaoma kuti unzwisise pakutanga kuona, usazvidya moyo nekuti ini ndichaita kuti zvive nyore kunzwisisa Iyo default graph inomiririra avhareji yekuchengetedza mwero (%) yevashanyi vako vakasiyana pamazuva manomwe apfuura, 14, 21, kana makumi matatu mazuva.
Patafura iripazasi, iwe uchaona kuti musi waApril 1, 2015 (wechitatu mutsara), vashandisi vakasarudzika 174 vakashanyira webhusaiti, inozoshandiswa kumiririra zuva 0. Zvino, tarisa zuva 1 muchikamu chechitatu kuti uone kuti vangani yeva 174 vashanyi vakashanyira webhusaiti yacho gare gare. Musi waApril 2, 2015, 9.2% yakadzoka uye chete 4.02% yakashanyirwa musi waApril 3, 2015. Unogona kutarisa chinhu chimwe chete kumutsara wechina kuti uone kuti vangani vevashanyi vakasarudzika ve160 vakashanyira webhusaiti yako muna Kubvumbi 3, Kubvumbi 4, Kubvumbi 5 , zvichingoenda zvakadaro.
Ivhareji yemazuva manomwe iine 1,124 vashanyi inogona kuonekwa mumutsara wekutanga, uyo unomiririrwa mugirafu yepamusoro.
Kusvika ikozvino, ini ndaona iyi ongororo ichiitwa pane mazhinji mawebhusaiti. Ndakagumisa kuti mawebhusaiti asiri kuita mushe musvinu yekutsvaga kana chero imwe nzira yakakosha yekugadzira traffic inewo mwero wekuchengetedza wakaderera. Mawebhusaiti ayo anokoshesa mhando uye anokwevera mune yakadzikama traffic inozvirumbidza yakakwira kuchengetedza mitengo. Ndiyo tariro yangu kuti iwe unogona ikozvino kuongorora chiyero chekuchengetedza chewebsite yako. Asi, mubvunzo unotevera ndewkuti ongororo iyi ingashandiswa kupi Mhinduro ndeyekuti inoshandiswa zvakanyanya kuongorora mawebhusaiti uye nharembozha.
Cohort Kuongorora pane Mobile Zvishandiso
Nekuda kwekuti huwandu hwakawanda hwevagari vava kushandisa yavo smartphone kana piritsi kutsvaga iyo Internet, nharembozha dziri kuwedzera mazuva ano. Izvo zvinoita kuti kuongorora mushandisi maitiro ema mobile application kwakakosha kuti urambe uchikura. Kana iwe uchinetseka kuti vashandisi venguva yakareba sei vanobatana neako mbozhanhare app, kangani vashandisi kuvhura iyo app mune rimwe zuva, kana kuti kuita sei iyo app iri, iwe unogona kuwana dzese mhinduro dzako nekuitisa ongororo. Ipapo, iwe unenge uine ruzivo rwekuita yakakosha nzira yekuvandudza inowedzera kuveko kwekambani yako.
Saizvozvowo, pese paunogadziridza kune yako nharembozha, iwe unozogona kuoneka kuona mhedzisiro yekuvandudza. Kana yako yekuchengetedza mwero yakadzikira, zvino zvinoratidza kuti iwe unogona kunge wakarasikirwa nechimwe chinhu uye vashandisi havadi mhedzisiro yekupedzisira. Iwe unogona ipapo kushandisa kunzwisisa kwako pane mushandisi maitiro kuti uite inotevera yekuvandudza ive nani kwazvo. Chero shanduko pamaitiro emushandisi enharembozha inogona kuteedzerwa zviri nyore uye kubviswa kuita kuti kuedza kwako kunotevera kuitwe kwakawanda.
Pazasi pane muenzaniso wecohort ongororo iyo yakaitwa pane mbozhanhare yekushandisa nevane 8,908 vanoshandisa vhiki nevhiki. Sezvauri kuona, avhareji yekuchengetedza chiyero chaive 32.35% pazuva 1, izvo zvinoderedza zuva nezuva. Uine iyi data, iwe unofanirwa kutanga kutarisa kuti ungachengeta sei vashandisi vachiita nechishandiso kuitira kuti mwero wekuchengetedza uwedzere nevazhinji vashandisi vanovhura iyo purogiramu zuva nezuva. Kana yangomuka, pachave neshanduko yepamusoro yekuwana vashanyi vatsva nekuda kwe muromo kushambadza.
Kugadziridza iro Cohort Kuongorora Chirevo
Paunovhura Google Analytics kuti uite ongororo yako, iwe uchaona kuti chirevo chinogona kugadziriswa zvichienderana nerudzi rweboka, saizi yeboka, metric, uye date renji.
Rudzi rweboka - Parizvino, iyo beta vhezheni inongokutendera iwe kuti uwane zuva rekutora, nokudaro iwe unogona kuona maitiro evashandisi vakashanyira saiti pane rimwe zuva uye maitiro avakaita kwenguva yakati.
Saizi Cohort - Izvi zvinoreva shanduko muhukuru hwevacohort nemazuva, vhiki, kana kunyangwe mwedzi. Kugadzira mushumo wako zvichibva pahukuru hwecohort kunogona kukubatsira iwe kuwana kuti vangani vashanyi vakashanyira muna Ndira uye vakadzoka mumwedzi waKukadzi. Paunenge uchisarudza iyo cohort saizi, iwe unogona kusarudza dheti renhamba yemanomwe, 14, 21, kana mazuva makumi matatu uchisarudza saizi remavhiki.
Metric - Ichi ndicho chinhu chimwe chete chaunotsvaga kuyera. Panguva ino, metriki dzinogona kusanganisira shanduko pamushandisi, kutariswa peji nemushanyi, zvikamu zvemuenzi, kutariswa kwemaapp pavatengi, kuchengetedzwa kwevashandisi, kupedzisa chinangwa, kutendeuka, nezvimwe. Zvese zvinogona kubatsira kana uchiona kubudirira kweyakawandisa yako.
Zuva Range - Nezve izvi, iwe unogona kusiyanisa iro renji yemazuva kubva pamazuva, mavhiki, nemwedzi zvichienderana nehukuru hwako hweboka.
Izvo zvakare zvinoita kuti iwe umhanye iyo ongororo kumatunhu akasiyana zvikamu. Semuenzaniso, unogona kutarisa pavhareji nguva yenguva yevashanyi pane nhare mbozha maringe nevashanyi vanoshandisa komputa yedesktop. Kana, iwe unogona kumisikidza mushumo zvichibva pakutsvaga kwevashanyi kutsva mukati meimwe vhiki, senge vhiki risati rasvika Kisimusi 2014. Kuita izvi kunogona kuratidza kuti vashanyi vewebhusaiti yako vanopedza nguva yakawanda panzvimbo iyi vachishandisa komputa yedesktop, kunyanya pamberi peKisimusi.
Usatomboora moyo kana cohort ongororo yakanyanya kuomarara kuti unzwisise kekutanga nekuti unozobata nenguva. Icho chinhu chinobatsira kwazvo chinokutendera iwe kuti uongorore kunonoka kupindura kwevashandisi zvakananga kuburikidza neyako Google Analytics chishandiso. Kuderedza iyi chaiyo data kunogona kukubatsira iwe kuita nyowani yekuita yekuvandudza kune yako webhusaiti uye / kana nharembozha yekushandurwa kuri nani.
Tags: Analyticscohortongororo yebokagoogle analyticsgoogle analytics cohort kuongororachii chinonzi cohort kuongorora
Shane Barker inyanzvi yekushambadzira yedhijitari yemakore gumi nemashanu nekusimbisirwa kweKutengesa Kwekufurira mumakore mashanu apfuura. Iye anozivikanwa mune zvekutengesa fanera, yakanangwa traffic uye webhusaiti shanduko. Akataurirana nemakambani eFortune 15, Vafuridzi vane zvigadzirwa zvemadhijitari, uye vanoverengeka veA-Chinyorwa vanozivikanwa.
Mutengi Akatarisana neMidziyo uye Maitiro Aunotengesa Navo
Muenzaniso wawakaratidza mune ino we mobile app. Ndeipi app iyi?
Jul 23, 2015 pa 4: 49 AM
Tinotenda zvikuru Shane nenguva yako yekutitsanangurira nezve Cohort Analysis. Kwakanga kuri kuverenga kwakanaka! Takagamuchira maemail akati wandei achibvunza nezve Cohort iyi asi ikozvino tinogona kuvapa yako link 😉